UJustin Bieber Uyavuma ukuthi 'Wayengenandaba' Ngenkathi Ethandana no-Selena Gomez - Ukuzijabulisa
UJustin Bieber Uyavuma ukuthi 'Wayengenandaba' Ngenkathi Ethandana no-Selena Gomez
Uthi wayehlanya futhi ehlane ngaphambi komshado wakhe noHailey Baldwin.
UJustin Bieber uhlale phansi waba nengxoxo noZane Lowe we-Apple Music kuleli sonto wabe esedlulisa ukubheka ngaphakathi ebudlelwaneni bakhe nonkosikazi uHailey Bieber, owagqugquzela izingoma eziningi ezikwi-albhamu yakhe entsha, Izinguquko. Ngokusho kukaJustin, uHailey umsizile ukuthi akhule kule minyaka embalwa eyedlule — yize evuma ukuthi kumthathe isikhashana ukufika endaweni lapho angazibophezela khona. Ubuye futhi wabhekisa esikhathini sakhe no-Selena Gomez wakhe wakudala, ekwabelana ngokuthi uyazi ukuthi udinga ukubhekana nezinkinga zobudlelwano bakhe bangaphambi kokuba ashade noHailey.
Ngicabanga ukuthi ngalimala nje ebudlelwaneni bami bangaphambili, uyachaza. Ngicabanga ukuthi bengisabhekene nokungathetheleli okuningi nakho konke lokho. Uma ngikhuluma iqiniso, angicabangi nokuthi ngangazi ukuthi yini engangilwa nayo ngaleso sikhathi.
Lezi zithandani bezithandana futhi zicishe, futhi ngesikhathi sekhefu, kusho uBieber, uzozama ukusebenzela ukuzithuthukisa. Ebudlelwaneni bami bangaphambilini, ngahamba ngavele ngahlanya ngangena ehlane, nganginobudedengu, esho, ebhekisa esikhathini sakhe esidlule noGomez. Ngalesi sikhathi, ngizinike isikhathi sokwakha ngokwami ​​futhi ngigxila kimi, futhi ngazama ukwenza izinqumo ezifanele nakho konke lokho. Futhi yebo, ngibe ngcono.
Ngokuqondene noGomez, ubeke imizwa yakhe ngokuhlukana kwakhe noBieber kwi-albhamu yakhe Akuvamile, futhi wathi wahlukunyezwa emoyeni. Kuyingozi ukuhlala emqondweni wesisulu. Futhi angihloniphi, nginomuzwa wokuthi ngangiyisisulu sokuhlukunyezwa okuthile, kusho yena ingxoxo neNPR .
Lapho owayebuza imibuzo embuza ukuthi ngabe wayeqonde ukuhlukunyezwa ngokomzwelo, uGomez waphendula wathi, Yebo, futhi ngicabanga ukuthi kuyinto leyo — kwakudingeka ngithole indlela yokuyiqonda njengomuntu omdala. Futhi bekufanele ngiqonde izinqumo engangizenza. Noma ngingafuni ukuchitha impilo yami yonke ngikhuluma ngalokhu, ngiyaziqhenya ngokuthi ngingasho ukuthi ngizizwa nginamandla kunawo wonke engake ngazizwa futhi ngithole indlela yokuhamba ngawo nje umusa omkhulu ngangokunokwenzeka.
UBieber uphinde wavuma ukuthi wahlukumeza ubudlelwano bakhe bangaphambilini ku Okuthunyelwe kwe-Instagram kusuka ngoSepthemba, abhale kuwo, ngacasuka, ngangihlonipha abantu besifazane futhi ngathukuthela. Kodwa-ke, ngenkathi ekhuluma noLowe, ubalule uHailey njengesizathu esikhulu sokuthi akwazi ukubuyisana nesikhathi sakhe esedlule futhi aqhubekele phambili.
Kube yisizathu esikhulu sokuthi kungani ngibuya futhi ngiphumelele kulokhu, kusho yena. Ngicabanga ukuthi uyisizathu impela. Kwakungeke kube nendaba ngaphandle kwakhe; uvele ayihlanganise yonke into. Ngisho ukuthi, unginikeza into engizokhuluma ngayo…. Ungumuntu engifunda ukumthanda ngokungenamibandela futhi ngiqale umndeni.
Ungabuka ingxoxo ephelele kaBieber, ngezansi:
ungafaka kanjani i-eyeliner ephezulu
iwebhusayithi esemthethweni ye-gilligan & o'malley
intombazane eyingqingili neqonde ngqo ocansini